RD Kongo: Krismasy nampahonena · Global Voices teny Malagasy
RD Kongo: Krismasy nampahonena	Voadika ny 26 Desambra 2008 20:46 GMT
Zarao: Cedric Kalonji no manoratra ny Krisimasy “mampahonena” niainany tao Kinshasa:
Sambany, nangina ny noely nianako teto Kinshasa. Tsy nisy temotra nandravaka ny arabe, tsy nisy ravaka akory aza, tsy nisy hirahira: izany hoe tsy nisy na inona na inona. Sahala amin'ny reraka tanteraka ny mponina eto an-tananako ka tsy manao ny fahazarany intsony miezaka ny mifety amim-pifaliana rehefa amin'ny fotoanan'ny Nahaterahan'ny Mpamonjy tahaka izao. Eto amin'ny fokotaniko moa dia nanana hevitra mahafinaritra izay ny SNEL [jirama any amin-dry zareo] hanapaka tanteraka ny jiro. Fa na dia eo aza izany rehetra izany, nanapa-kevitra ny hifety hatrany izahay tato an-trano ka niverina tamin'ny fomba fahandro fahinyndray tamin'ny afo kitay e! Ny hirahira indray moa dia ny radion'ny fiaran'ny mpifanolo-bodi-rindrina no nampiasaina.
Tadidiko tsara tamin'izaho mbola kely fa voatery nividy akanjo vaovao ho an'ny zanany ny ray aman-dreniko ho fanomezana ho azy ireo mandritra ny noely. Ary raha teo amin'ny resaka sakafo indray dia ny 25 Desambra no fotoana fanararaotra hiovana ny nahandro mahazatra ka hanolorana sakafo manokana (hanimpitoloha) ho an'ny fianakaviana. Miova izany ankehitriny. Efa mahatratra ny ankamaroan'ny ankohonana Kôngoley ny fahantrana ka nampiova ny fahazarana. Fa ny tena mahavariana ahy dia tsy mimenomenona amin'izany ihany ny Kôngoley.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJennifer Brea
Tantaran'ny R.D. Kongo farany 04 Febroary 2015Afrika MaintyNikatso ny Aterineto Tao RDC Nandritra ny Fihetsiketseha-Panoherana an'i Kabila, 36 no Maty
24 Desambra 2014Afrika MaintyDr. Mukwege avy ao RDC : ‘Ahoana no Fangina’ Rehefa Miatrika Herisetra Ara-Nofo?
28 Jona 2014Afrika MaintyAoka Izay Ny Fampiasàna Ny Fitomboana Ho Fialan-tsiny Handotoana, Hoy Ireo Afrikana Mafana Fo
Tohiny » 3 hevitra
ANDRIANJANHARY Roger	– Mitady ny iran’i NANAHARY ilay hoe “NY NOELINAY”
15 Desambra 2012, 18:00	Raha hamaly ity hevitra ity Jentilisa Momba ny mpandray anjara »	tena tsy mahita isika fa ny tononkira izao no misy ato : http://tononkira.serasera.org/hira/ny-nanahary/noely
15 Desambra 2012, 19:53	Raha hamaly ity hevitra ity Jentilisa Momba ny mpandray anjara »	Ity misy mpiray tanindrazana vao nametraka rohy ka sao mahaliana anao!
24 Desambra 2012, 13:03	Raha hamaly ity hevitra ity Ajanony ihany